05 | October | 2014 | Danya Wadi
UN calls for solution to Rohingyas’ citizenship
By danyawadi October 5, 2014 Leaveacomment
Posted on October 5, 2014 by Ibrahim Sah — Sunday,5October 2014 Burma Times: UNITED NATIONS – The United Nations has called on Myanmar to ensure an “equitable and just solution” to the citizenship of Rohingya Muslims as human rights groups criticizedagovernment plan to deal with the issue as discriminatory. Asked to […]
ဒုတိယအကြိမ်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေ
နိုင်ငံသားများသာ ပါတီ ထောင်ခွင့် ပြုမည် October 4, 2014 နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ(နအဖ)ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်မှတ်ရေးထိုး ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင် နိုင်ငံသား မဟုတ်သည့် ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ် (White Card) ကိုင် ဆောင်ထား သူများကို နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင် ခွင့်ပြုထားသည့် အပေါ် ယခု ခွင့်မပြုတော့ဟု သတင်း ရရှိသည်။ နအဖ စစ်အစိုးရက ဥပဒေအမှတ် ၂/၂၀၁၀ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင် White Card ကိုင်ဆောင်သူများကိုပါ နိုင်ငံရေး ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် ပေးထား သည် […]
မွတ်စလင်တွေရဲ့အီးဒ်ဒွလ်အသွဟာပွဲတော်အတွက် သမ္မတအိုဘားမားနုတ်ခွန်းဆက်ဆုမွန် ကောင်း တောင်း
အောက်တိုဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အောက်တိုဘာ ၅ရက်နှင့် ၆ ရက်နေ့များတွင် ကျရောက်မည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အီဒွလ်အသွဟာပွဲတော်အတွက် အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားက နှုတ်ခွန်း ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် စနေနေ့က ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဟဂ်ျဘုရားဖူး ခရီးသွားကြသူများအတွက်လည်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မွတ်စလင် အိမ်နီးချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဟာ အီးဒ်ပွဲ ဆင်နွှဲဖို့ စုရုံးနေကြတဲ့အချိန် ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးနဲ့ လူမျိုးအစုံဆုံး ဟဂ်ျကျင့်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော မွတ်စလင်တွေထဲမှာ အမေရိကန်မွတ်စလင် ထောင်ပေါင်းများစွာဟာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးတွေ၊ အုပ်စုတွေ၊ ဘာသာအယူဝါဒတွေ၊ ကျား၊ မ၊ […]
ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်သည်၂ဝ၁၅-ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုး အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင် နေဟု သမ္မတေ ပြော
– ချစ်မင်းထွန်း၊ Flower News ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၀)၊ အမှတ် (၃၉)။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၃။ ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် အစိုး ရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသော ငြိမ်း ချမ်းရေးလက်မှတ်သည် လာမည့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ဆိုး ကျိုးများ ဖြစ် လာနိုင်သလို ကောင်းကျိုးများ လည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း အောက်တို ဘာ ၁ ရက်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယို မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ အ တွက် ပြောကြားသည့် လစဉ်မိန့်ခွန်းတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းရေဒီယိုမိန့် ခွန်းတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ ညီမှုစာချုပ် […]
ကုရ်ဘာနီ အီးဒ် ပွဲတော်မှ အသားများ ဂါဇာနှင့် ဆီးရီးယားသို့ တူရကီ လှူဒါန်းမည်
အောက်တိုဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – မကြာမီကျရောက်တော့မည့် အီဒွလ် အသွဟာပွဲတော်မှ ရရှိမည့် အသားများကို ဂါဇာနှင့် ဆီးရီးယားရှိ ဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းသွားမည်ဟု တူရကီ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး ဖောင်းဒေးရှင်း IHH က ကြေညာလိုက်သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၌ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အီဒွလ်အသွဟာ ပွဲတော်အတွင်း သားကောင်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ခန့်မှ ရရှိသော အသားများကို အကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အဆိုပါ နေရာ ၂ ခုအား ပေးပို့သွားမည်ဟု IHH ဒုတိယဥက္ကဌ ယာဗူဇ် ဒီဒီက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ထောင်ပေါင်း များစွာသော ပြည်သူတွေဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ မိဘမဲ့တွေ၊ ခင်ပွန်းမရှိတဲ့ဇနီးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ […]
အရှေ့ဂျေရုစလင်အခြေချ အိမ်ရာဆောက်လုပ်နေမှု အစ္စရေး ကို အမေရိကန် သတိပေး
အောက်တိုဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – ပါလက်စတိုင်းပိုင် အရှေ့ဂျေရုစလင်တွင် ဆောက်လုပ်ရန် အစ္စရေး အစိုးရက စီစဉ်ထားသည့် အခြေချ အိမ်ရာများအတွက် နေတန်ယာဟုအား အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားက သတိပေးလိုက်သည်ဟု အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဂျိုရှ့် အန်းနက်စ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ယမန်နေ့က နေတန်ယာဟု အိမ်ဖြူတော်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံစဉ် အိုဘားမားက ပါလက်စတိုင်း ပိုင်နက်များ၌ အစ္စရေး၏ တရားမ၀င် အိမ်ရာများ ဆောက် လုပ်ခြင်းကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ သတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အန်းနက်စ်ကမူ အစ္စရေး၏ ထိုလုပ်ရပ်က နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ရှုတ်ချမှုကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဟု ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအား ပေးထားခဲ့သည့် ကတိ က၀တ် အတွက်လည်း မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် […]
Posted on October 4, 2014 by Ibrahim Sah — Burma;’ Information Minister Ye Htut posted this picture on his Facebook of himself (centre) with US Ambassador Mitchell on3October 2014. Saturday,4October 2014 Burma Times: The Burmese government will cooperate with the United States to fight against hate speech. Burma’s Information Minister Ye Htut […]